« Examinez-vous vous-même »
Thème : « Qui est Jésus-Christ d’après la Bible ? »
« Diniho ny tenanareo na mitoetra amin’ny finoana ianareo na tsia ; izahao toetra ny tenanareo »
2 Korintiana 13.5
IZA MOA I JESOA KRISTY ARAKA NY
ANAMBARAN’NY BAIBOLY AZY ?
IZA I JESOA KRISTY …
Moa olona ve Izy ?
1. Ahoana no iantsoana an’i Jesoa ao amin’ny 1 Timoty 2.5 ?
2. Naka ny endrik’iza Izy raha tety an-tany ? (Filipiana 2.8)
3. Ahoana no iantsoana ny fietren-tena toy izany ? (Filipiana 2.7)
4. Moa mitovy amin’ny anjely ve i Jesoa, raha ny maha olona Azy no jerena ? (Hebreo 2.7)
5. Moa lehibe noho ny Rainy ve i Jesoa, raha ny maha olona Azy no jerena ? (Jaona 14.28)
6. Ahoana no niantsoan’i Jesoa an’Andriamanitra, amin’ny maha olona Azy ? (Jaona 20.17)
7. Iza io lehilahy iray izay hitsaran’Andriamanitra an’izao tontolo izao io ? (Asa 17.31)
Moa anjely ve Izy ?
8. Moa afaka miseho amin’ny olona amin’ny endrika anjely ve Andriamanitra - izay tsy anjely velively – (Mpitsara 6.11-14 ; Genesisy 48.15-16 ; Eksodosy 3.2-6), na amin’ny endrika olombelona ? (Genesisy 18.1-5, 9-14, 32 ; 19.1).
9. Iza io olona tondroin’ny Daniela 10 io (and.5 sy 6), izay hafa amin’ny Arkanjely Mikaela ? (and.12, 13 ary 21).
10. Moa misy andinin-tSoratra Masina ve izay milaza fa iray ihany i Jesoa sy i Mikaela ? Raha eny dia lazao hoe aiza no misy izany andininy izany .
11. Moa anjely ve no nilazan’Andriamanitra hoe « Zanako Ianao » ao amin’ny Hebreo 1.5 ?
12 Moa misy anjely avelan’Andriamanitra hipetraka eo an-kavanany ao amin’ny voninahiny ve ?
13. Moa anjely iray, na maromaro, ve no nanankinan’Andriamanitra ny fiainana ho avy ? (Hebreo 2.5). Iza no nanankinany izany ?
14. Tamin’ny alalan’iza no nahariana ny anjely rehetra ?
15. Moa manaiky ny homen’olombelona voninahitra ve ny anjely ?
(izany hoe ny hiankohofana : teny iray ihany no ilazana an’ireo
amin’ny teny grika) (Apokalypsy 22.8-9)
16. Moa nanaiky ny fanomezam-boninahitra nataon’ny olona taminy
ve i Jesoa (nanaiky ny hiankohofana) ? (Matio 14.33 ; 28.9 ;
Lioka 24.52, …)
Andriamanitra ve Izy ?
17. Andriamanitra no antsoiana hoe «Ilay Voalohany sy Farany »
(Isaia 44.6), iza no misalotra izany anarana iantsoana
an’Andriamanitra izany ao amin’ny Apokalypsy 1.17-18 ?
18. Andriamanitra no « Alfa sy Omega », Izy no « Fiandohana sy
Fiafarana » (Apokalypsy 1.8 ; 21.6). Iza ihany koa no mitafy
izany anarana izany ao amin’ny Apokalypsy 22.13 (ampitahao
amin’ny and.16 sy 20) ?
19. I Jehovah no Mpahary, araka ny ambaran’ny Salamo 102.25-26
(Isaia 44.24). Iza kosa no Mpahary ambaran’ny Hebreo 1.10 ?
(jereo ny and.8)
20. I Jehovah no tondroina amin’ny hoe « Fahagola » ao amin’ny
Daniela 7.9-10. Iza io « Zanak’olona » ambaran’ny Apokalypsy
1.13-16 izay mitafy ny toetr’ilay Fahagola io ?
21. Antsoina hoe « Andriamanitra mahery » i Jehovah ao amin’ny
Isaia 10.21, iza ihany koa no antsoina hoe « Andriamanitra
mahery » ao amin’ny toko mialoha an’io ? (9.6)
22. Raha tsy misy « Andriamanitra hafa » (ary tsy hisy hafa) voaforona fa i Jehovah, dia Izy irery ihany, no Izy, nahoana no lazaina fa : « ny Teny dia tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra » ? (Jaona 1.1)
23. Naniraka mpaminany hiteny tamin’ny vahoaka i Jehovah (Jeremia 35.15), fa iza kosa indray no maniraka azy ireny araka ny Matio 23.34) ?
24. I Jaona mpanao Batisa no hialoha ka hamboatra ny lalan’i Jehovah (Malakia 3.1 ; Lioka 1.76), ny lalan’iza anefa no namboariny, iza no nialohavany ? (Jaona 3.28 ; Marka 1.1-3, 9)
25. Mahita ny voninahitr’Andriamanitra i Isaia ao amin’ny toko faha-6 amin’ny bokiny (and.5). Ny voninahitr’iza anefa io hitany io raha araka ny Jaona 12.41 ? (ampitahao amin’ny and.36 sy 42)
26. I Jehovah no hany Mpamonjy (Isaia 43.11). Iza kosa no Mpamonjy resahin’ny Jaona 4.42 sy ny 2 Timoty 1.10 ?
27. I Jehovah irery ihany no mpandinika ny fo sy ny voa (Jeremia
17.10), iza ihany koa no mahefa izany ? (Apokalypsy 2.23)
28. Milaza i Jehovah ao amin’ny Zakaria 11.12-13 fa notombanan’ny vahoakany sekely volafotsy telopolo Izy (vidin’andevo anankiray izany : Eksodosy 21.32). Iza anefa no namidy tamin’ny vola telopolo, araka ny faminanian’i Zakaria, ao amin’ny Matio 26.15 sy 27.3-10 ?
29. Moa misy zavatra manokana ananan’Andriamanitra ka tsy an’i Jesoa ve ? (Jaona 16.15 sy 17.10)
30. Moa misy zavatra hain’Andriamanitra kanefa tsy vitan’i Jesoa ve ? (Jaona 5.19)
31. Moa nisy zavatra ary ve raha tsy teo i Jesoa Kristy ? (Jaona 1.3)
32. Andriamanitra izy tenany no ho avy hampihatra ny fitsaràny ety ambonin’ny tany (Isaia 35.4). Ny Apokalypsy 19.11-16 kosa maneho amintsika an’Ilay Iray ho avy hanatanteraka izany : iza io ? (ampitahao amin’ny Joda 14, 15)
33. Tsy maintsy hampamoahina eo anatrehan’Andriamanitra ny olona rehetra aorian’ny fahafatesany (Hebreo 9.27, Romana 14.12), fa iza kosa no hany tokana afaka ny hitsara azy ? (Jaona 5.22)
34. I Jehovah no « Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo » (1 Timoty 6.15), iza anefa no tena Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo » ? (Apokalypsy 19.16)
35. Nahoana Andriamanitra no mibaiko ny anjely hanome voninahitra ny Tompo Jesoa (= hiankohoka aminy) (Hebreo 1.6), kanefa tsy misy na iza na iza mendrika ny homem-boninahitra
( = hiankohofana) afa-tsy Andriamanitra irery ihany ?
36. Raha tsy tian’Andriamanitra homena olon-kafa ankoatra Azy ny voninahiny (Isaia 42.8, 48.11). Nahoana no ekeny ny hanomezam-boninahitra ny Zanaka tahaka ny hanomezam-boninahitra Azy ? (Jaona 5.23)
37. Andriamanitra irery ihany no mendrika handray ny « voninahitra sy haja ary hery » (Apokalypsy 4.11), iza ihany koa anefa no voalaza fa mendrika ny handray izany ? (Apokalypsy 5.12)
38. Nahoana ireo Jiosy no nitady izay hahafaty an’i Jesoa ?
39. Ahoana no niantsoan’i Tomasy ny Tompo Jesoa ao amin’ny Jaona 20.28 ?
40. Fehiny : Mampianatra antsika ny Baiboly fa i Jesoa Kristy dia :
Ho famenon’ity fanadihadiana natao teto ity dia vakio ihany koa ireto andininy manaraka ireto : Jaona 1.1 ; Romana 9.5 ; Kolosiana 2.9 ;
1 Jaona 5.11-13, 20 ; 2 Jaona 9-11.